Boky fahatelon'i Henoka - Wikipedia
Ny Boky fahatelon'i Henoka dia soratra apokaliptikan'ny jodaisma tranainy. Resahina indrindra ao ny anjely Metatrona, mpanompon'ny Seza fiandrianan'Andriamanitra sady mitoetra eo akaikin'Andriamanitra.
Tsy isan'ny kanona ny Boky fahatelon'i Henoka na ho an'ny fivavahana jiosy na ho an'ny fiangonana kristiana. Ny mistika jiosy no tena mandala azy.
2 Fizaràn'ny boky sy ny famintinana azy
2.1 Fizaràn'ny boky
2.2 Famintinana ny boky
3 Jerero koa:
Atao hoe Bokin'ny Lapa (izay fandikana ny teny hebreo hoe ספר היכלות / Sefer Hekhalot) koa ny Boky fahatelon'i Henoka. Voasoratra amin'ny fiteny hebreo io boky io ka izany no anaovana azy hoe Boky hebreon'i Henoka (hafohezina amin'ny hoe Henoka hebreo) nefa ahitana teny vitsivitsy voasoratra amin'ny fiteny arameana sy grika ary latina ihany koa. Atao hoe Bokin'ny Raby Ismaela ilay Mpisorom-be na Fanambaràn'i Metatrona koa io boky io.
Na dia mitondra ny anaran'i Henoka aza io bony io dia tsy i Henoka no nanoratra azy. Tokony ho tany amin'ny taonjato faha-5 na faha-4 no nanoratana azy.
Fizaràn'ny boky sy ny famintinana azy[hanova | hanova ny fango]
Azo zaraina efatra ny Boky fahatelon'i Henoka:
Ny fiakaran'y Raby Ismaela (Rabbi Ishmael) tany an-danitra (toko 1 - 3)
Ny fiakaran'i Henoka tany an-danitra (toko 3 - 16)
Ny firafitry ny tontolo any an-danitra sy ny fiasany (toko 17 - 40)
Ny andro farany sy izao rehetra izao.
Famintinana ny boky[hanova | hanova ny fango]
Aorian'ny famerenana izay voasoratra ao amin'ny Bokin'ny Genesisy (Gen. 5.24) izay fanombohan'ny Bokin'ny Lapa dia tsy manao fanazavana avy hatrany ilay boky fa mitantara ny fiakarana mistikan'ny Raby Ismaela any amin'ny Lapan'Andriamanitra sy ny fahatalanjonany nijery ny Kalesin-danitra ary ny fanoheran'ny anjely maro ny fahatongavany amin'ny maha olombelona azy ao amin'ny tontolo misy ireo anjely ireo.
Nampidirin'ny arikanjely atao hoe Metatrona teo an-tokonan'ny Lapa Fahafito ny Raby Ismaela mba hahita fa izy (i Metatrona) dia fiovan-tarehin'ny patriarka Henoka, zanak'i Jareda (na Iareda) izay mifehy ny anjely fitopolo izay anjelin'ny firenena maro.
Voalohany dia nanazava taminy ny anjely Metatrona fa taorian'ny nandroahana an'i Adama avy tao amin'ny saha Edena dia nandao ny tany Andriamanitra, ka nanjary mpanompo sampy ny olombelona taranak'i Adama tamin'izay. Nambarany koa fa na dia nisy tsy nankasitraka aza ireo anjely, isan'izany i Azazela (Azaz'el) na Azaela (Aza'el), dia nasain'Andriamanitra nakarina tany an-danitra i Adama mba hesorina amin'io taranaka niharatsy fomba io. I Metatrona dia mitantara izany fakana an'i Adama izany sy ny tombom-pahendrena sy fanetren-tena sy hatsaran-po sy toetra tsara hafa ary indrindra ny "fanalehibeazana" azy avy amin'ilay Masina.
Nasehon'i Metatrona azy koa ny firafitra miendrinka faribolana mitovy ivo, ara-bakiteny "efitrano anaty efitrano", dia ireo Lapan-danitra enina izay tsy maintsy niampitan'ny Raby Ismaela sady nitsapana azy tamin'ny fisedrana maro amin'ny alalan'ny fihaonany tamin'ny anjely tsy faly aminy izay tsy maintsy noreseny lahatra ho tia azy tamin'ny alalan'ny Anaran'Andriamanitra mba hankanesany avy amin'ny Lapa iray mankamin'ny Lapa hafa mandra-pahatongany eny amin'ny Vavahadin'ny Lapa Fahafito.
Ao amin'ny toko manaraka dia midera ny Raby Ismaela izay taranak'i Arona mpisorom-ben'i Israely i Metatrona, izany dia nahazoany ny sata manokana ahafahany miara-mipetraka amin'ireo anjely.
Any aoriana kokoa ao amin'ny Bokin'ny Lapa dia nanontany an'i Metatrona ny tena anarany ny Raby Ismaela ka izany fanontaniana izany dia mampahatsiahy ny soratra ao amin'ny Baiboly momba ny tolona nifanaovan'i Jakoba sy ny anjely izay nanontany anarana (Gen. 32.30) sy ilay fifanatrehan'i Manoa sy ny anjely iray izay nanontaniany anarana koa ao amin'ny Bokin'ny Mpitsara (Mpits. 13.17-18). Tsy nahazo valin-teny avy tamin'ireo anjely ireo i Jakoba sy i Manoa fa ny Raby Ismaela kosa dia nahazo valin-teny tamin'i Metatrona, izay nanazava taminy fa manana anarana miisa fitopolo izy, ka ny tena be voninahitra amin'ireo dia ilay anarana misy litera efatra.
Ao amin'ny toko faraparany izay miresaka ny amin'ny tontolon'ny anjely sy ny amin'izao tontolo izao ary ny fiafaran'ny zavatra rehetra, i Metatrona dia nanambara tamin'ny Raby Ismaela ny tsiambaratelon'Andriamanitra izay nambaran'ny Masina taminy mivantana.
Jerero koa:[hanova | hanova ny fango]
↑ "Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka; ka tsy hita izy, fa nentin'Andriamanitra." (Gen. 5.24)
↑ "Dia nanontany Jakoba ka nanao hoe: Masìna Hianao, lazao kely izay anaranao. Ary hoy Izy: Ahoana no anontanianao ny anarako? Dia nitahy azy teo Izy." (Gen. 35.30)
↑ "17 Dia hoy Manoa tamin'Ilay Anjelin'i Jehovah: Iza moa no anaranao, mba hanomezanay voninahitra Anao, rehefa tanteraka ny teninao? 18 Ary hoy Ilay Anjelin'i Jehovah taminy: Nahoana no manontany ny anarako ianao? Fa anarana mahagaga izany." (Mpits. 1317-18).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Boky_fahatelon%27i_Henoka&oldid=976721"
Voaova farany tamin'ny 11 Novambra 2019 amin'ny 04:45 ity pejy ity.